NYI LYNN SECK 18+ DEN: ဓားစာခံငှက်ကြီး
Posted by NLS at 4/16/2010 05:33:00 PM
22 Responses to “ဓားစာခံငှက်ကြီး”
ကိုငှက် ကြီး အတွက် ဝမ်းနဲ့ပါတယ် ..
မူဆယ်မှာကောပေါက်တယ်လို.ပြောနေကျလို.သိကြလားမသိဘူး ကျွန်တော်တို.ကတော.အဝေးရောက်နေတာဆိုတော.မသိကျလို. သူငယ်ချင်းတွေများပါသွားသေးလားလို.လိုက်မေးနေရတာပါ သေဆုံးသွားသူတွေအတွက်တော.၀မ်းနည်းပါတယ်ဗျာ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ.........သင်္ကြန်သူငယ်ချင်းများ
မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ဒီက သူငယ်ချင်းအားလုံးနှင့် တကွ ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းမိပါတယ်ဗျာ...
ဘဝဆက်တိုင်း ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ မကြုံတွေ့ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ဗျာ....
ကိုညီလင်းဆက် ရဲ့ ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ တစ်ပိုင်းတစ်စ အမှတ်တရပုံတွေ ဦးဦးဖျားဖျား ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေကြည့်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အတွက် ကိုညီလင်းဆက်ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ
...ကိုငှက်ကြီး တစ်ယောက်ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေဗျာ...
ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ
Kaw Kaw said...
Deeply condolence for Our Friend AKKMg..
Kaung Yarr Thu GaThi Larr Parr Sayy ThiNgeChin..
April 17, 2010 at 6:35 AM
ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားပြီးဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။ အလုပ်မအားလို့ ဘလော့ဂ်တွေ မလည်ဖြစ်၊ သတင်းတွေ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာ တာတပတ်နီးပါး ရှိသွားပြီး မနေ့ညနေက ဘလော့ဂ်ထဲဝင်တော့ ပထမဦးဆုံး ဖတ်ရတဲ့ပို့စ်က ကိုညီလင်းဆက် ပို့စ်ပါပဲ။ မှတ်ချက်တချို့ကိုလည်း ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကိုပဲ ခွဲခွဲ သေဆုံးသွား၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားသူတွေဟာ အပြစ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ခွဲတဲ့ ဗုံးခွဲတဲ့သူကတော့ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို လုပ်တဲ့သူအဖြစ် ရှုပ်ချပါတယ်။ ထိခိုက်ကျဆုံးသူများရဲ့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများနဲ့ ထပ်တူ ခံစားရပါတယ်။ သေဆုံးသူများအားလုံး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ၊ ဒဏ်ရာရရှိပြီး အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူများ အမြန်ဆုံး သက်သာကျန်းမာပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
If u have money,you can buy so many bombs.Why you blame to Government.The Anti government are always like that..they did it.
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကိုညီလင်းဆက် သူငယ်ချင်း ကောင်းရာဘုံဘ၀သို့ ရောက်ရှိပါစေ။
သကြန်မှာ ဗုံးပေါက်တာကို ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံဆိုသူများ က ဒေါက်တာလွမ်းဆွေရဲ့ဘလောက်မှာပျော်နေကြတယ်။
ဒေါက်တာလွမ်းဆွေရဲ့ cbox မှာရေးထားတာတွေ ကြည့်လိုက်ကြပါအုံး။မိုက်ရိုင်းလိုက်ကြတာ။
အရည်မရအဖတ်မရ အလကားဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးတွေ ... သူများကဟေးဟေး ဆိုလိုက်ဟေး..သူများက ယိုးယိုးဆို လိုက်ယိုး..သောက်မြန်မာတွေ သောက်ဆင့်ကိုမရှိဘူး
ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်အဆင့်အတန်းမြင်.မားသည်မသိပါ။ သိလည်းမသိလိုပါ။ ဒါပေမယ့် "သောက်မြန်မာတွေ သောက်ဆင့်ကိုမရှိဘူး" လို.ရေးသွားတဲ့ achitngatthaw ဆိုသူရဲ.အဆင့်အတန်းကိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ပြောပြလိုက်လို. သိလိုက်ရပါတယ်။
ဒီနေ.နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ.မို. ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ပြီးပါပြီ။ ရရှိသမျှကုသိုလ်များကို အပြစ်မဲ့ အသက်ပေးသွားကြသူများအား အမျှပေးဝေလိုက်ပါတယ်။ ရောက်ရာဘုံဘဝမှ သာဓုခေါ်ကြပါ။
ဘ၀တစ်ပါးသို့ မထင်မှတ်ပဲ ရောက်သွားတဲ့သူတွက် ကောင်းရာ ဘုံဘ၀သို့ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
(ဘလော့ပိုင်ရှင်က ဗမာလူမျိုးလား တိုင်းရင်းသားလားမသိဘူး... 'ပါ' ဆိုတဲ့စကားလုံးအစား 'ဟ' ဆိုတဲ့စကားလုံးကို သုံးနေတော့ ဖတ်ရတာ ကိုးလို့ကန့်လန့်ဖြစ်နေတယ်...မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် ဖတ်ရတာ တော်တော်ဆိုးတယ်...အဲဒီအရေးသားမျိုးကို ပြောင်းပေးနိုင်ရင် ဖတ်ရတာ ပိုပြီးချောမွေ့သွားမယ်ထင်တယ်)
Minn Khant 1948AD said...
ကို ဂျောက်ဂျက် ရေ
သူရေးတာ 'ဟ' မဟုတ်ပာဘူး။ ပာ ကိုပဲရေးတာပာ။ ဇှောဂျီ၂၀၀၉ ကိုသုံးပြီးရေးလို့ မောက်ချ အစား ဝိုက်ချ အနေနဲ့မြင်နေရတာပာ။ ကိုဂျောက်ဂျက်ရဲ့စက်မှာ ဇှောဂျီ၂၀၀၉ တင်လိုက်ရင် အမှန်အတိုင်းမြင်ရပာလိမ့်မယ်။ :P
Encoding ကိုလည်း UTF-8 ပြောင်းဖို့လိုကောင်းလိုပာလိမ့်မယ်။
ကျမက ကိုငှက်ကြီးခေါ် ကိုအေးကိုကိုမောင်နဲ့တလမ်းထဲနေသူပါရှငိ..ကျမတို့တလမ်းလုံးလည်းခင်စရာကောင်းပြီးကူညီတတ်သောကိုငှက်
၁၅ ရက်နေ့ကမသိပဲ၁၆ မနက်မှသိရပါတယ်.ကံကောင်းလွန်းလို့ ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းဖြစ်ကာနီးကနေ မိသားစုကရှာတွေ့လိုက်ပါတယ်..ကိုငှက်ကြီးကောင်း